I-Noopept (GVS-111) ipowder (157115-85-0) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Noopept (GVS-111) umgubo
Akukho kalo SKU: 157115-85-0. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Noopept (GVS-111) powder (157115-85-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Noopept (GVS-111) ipowder yenye yezona nootropics zomeleleyo ezikhoyo kwintengiso namhlanje. Inika ukonyusa ukuqonda konke kwaye inefuthe elincinci le-psychostimulatory. Ngokuchasene ne-nootropics, iimpembelelo zikaNoopept ziqala ngaphakathi kwemizuzu nje yokungenisa zenze ukhetho olugqwesileyo kanye phambi kwemisebenzi enzima yengqondo.
I-Noopept (GVS-111) ividiyo ye powder
I-Noopept (i-GVS-111) iifowuni ezisisiseko eziphambili
igama: I-Noopept (GVS-111) ipowder
Ifomula yeMolekyuli: C17H22N2O4
Ubunzima Ezinto: 318.37
Melt Point: 97-98 ° C
I-Noopept (GVS-111) ipowder kwi-SMART umjikelezo weziyobisi
I-noopept powder yigama le-brand ye-N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, i-molétic syntheticnootropic molecule.
I-Noopept (GVS-111) Ukusetyenziswa kwePowder
Ngenxa yobuchule bayo obuyingqambileyo, isilinganisi esinconywayo se-Noopept powder sincinci, ngokuqhelekileyo i-10 ku-20 mg ithathwa rhoqo ngokuphindwe kathathu imihla ngemihla. Isixa akufanele sidlule i-40 mg kwixesha le-24.
Ekubeni umzimba uphathisa i-Noopept arw powder ngokukhawuleza, kwaye unobomi obuncinane kakhulu emzimbeni womntu, kukhethwa ukuthatha amanani amancinci amaninzi ngokumelene nomlinganiselo othile omkhulu ukunyusa i-Noopept powder effects.
Xa uqala nge-Noopept powder, sincoma ukuqala ngeqondo elincinci elisezantsi, ngokuqwalasela ngenyameko, ngaphambi kokunyuka kwamayeza. Umntu ngamnye kufuneka azimisele ukuba ayenze umlinganiselo.
Ngefowder ifomu, i-Noopept powder idlalwa phantsi kweelwimi okanye ixutywe ngamanzi kwaye itywala. Iimpembelelo zithathwa ngokukhawuleza emva kokulawulwa, ngokukhawuleza kwimizuzu ye-15.
Ngokutsho kwelebula ye-dosing ezayo kwi-packet efakwe eRashiya, kucetyiswa ukuba uthathe i-Noopept powder eluhlaza kwii-1.5-3 iiveki kwaye, ukuba kuyimfuneko, ukuqala olunye umjikelezo emva kwekhefu le-1. Ngaphandle koko, abaninzi abasebenzisi be-nootropic balandela umjikelezo weentsuku ze-56 kunye neentsuku ze-4.
Akunconywa ukuba athathe i-Noopept powder ngokuhlwa, njengoko iimpembelelo zayo ziphazamisa ubuthongo.
Ziziphi iindidi ezifunekayo Ukuba ndikulindele kwi-GVS-111 powder (CAS 157115-85-0)
Inzuzo ye-Noopept eyona nto igxininiswe ngayo yindlela ekuphucula ngayo imemori nokuphucula inkqubo yokufunda. I-noopept powder, njengePiracetam, incedisa ngokubunjwa kwememori, kodwa ngeenzuzo ezongezelelweyo ezingabonakali kule ndlela yokugqibela, okuyiyo ukuhlanganiswa kwememori kunye nokubuyiswa kwememori. I-noopept powder iququzelela ulawulo olufanelekileyo lwazo zonke iifomu njengoko ziqhutywe ngongqondo, ezivumela ukufumana imemori engcono. Ngamanye amazwi, iimpawu eziqhutyelwa yimivo yethu zihlanjululwa ngakumbi njengoko zihanjiswa kwiibongo zethu ngendlela yememori.
Ngokusetyenziswa okuqhubekayo kwe-Noopept powder, uya kuqaphela ukuba unokwenza ulwazi olungakumbi kwaye ulwenze ngokulula ngokusetyenziswa kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla. Usenokukhumbuza amagama, iindawo, mhlawumbi ilizwi elikhulunywe kwimeko yokuhlangana, isihloko somculo owacingayo ukuba uyilibele ngaphambili, njalo njalo.
Izifundo zibonisa ukuba i-Noopept powder inempahla ephezulu ye-neuroprotective. Ukukhuthazwa kwee-neurons ezibangelwa ukuxhaswa kwezempilo kukuthintela umonakalo we-oxidative kunye ne-apoptosis ebuchosheni bomntu. Izigulane ezininzi ezijongene nokuphazamiseka kwengqondo rhoqo ziya kuxhamla kwi-dose ejwayelekile ye-Noopept powder eluhlaza ukukhusela imisebenzi engakumbi yokuhlukana.
Amanqanaba okwandisa i-NGF
I-NGF (i-Nerve Growth Factor) yiprotheyini ekhethekileyo emzimbeni ochaphazelekayo ekukhuleni, kulondolozo, kunye nokusinda kweeseli zeentsholongwane, kuquka neeseli zengqondo. I-NGF ikwajongwa njengomdlali oyintloko kwi-neurogenesis, amandla akho omzimba wokudala iiseli ezintsha.
Ngokunyusa ama-NGF ebuchosheni, sisekela iindlela ezibandakanyekayo kwi-neurogenesis ephucula ukuqhutyelwa kweenethiwekhi zomnxeba ngaphakathi kwengqondo, ukuvumela ukuba uqhagamshelwano olutsha lwe-neural. Isiphumo sithetha ukukwazi ukuphucula ingqondo kuzo zonke iindawo zokuqonda.
Amanqanaba okwandisa kwi-BDNF
I-BDNF (i-Brain-Derived Neurotrophic Factor) enye iprotheni emzimbeni onendima efanayo kwi-NGF ekhankanywe ngasentla. I-BDNF ithathwa njengenye yee-molecule ezibalulekileyo ezibandakanyekayo kwimemori, ebambe indima ebalulekileyo kwimimiselo emfutshane kunye nexesha elide lokukhumbula imemori.
Uphucula amaNxulumano phakathi kweBrain Hemispheres
Bobabini i-hemispheres ezilungileyo kunye nekhohlo zengqondo zineendawo zabo zendawo. Ngokusebenzisa i-Noopept powder, nganye yale mi sebenzi inokuphuculwa ngokuqulunqwa kwememori ehlukahlukeneyo, iingcamango, kunye neziqulatho. Kukho imiba phakathi kwale mi sebenzi ekhuthaza indlela esicinga ngayo. Yingakho abaninzi abantu baye bathi inqanaba lobomi beliphuculo elibonakalayo ekuthatheni i-Noopept powder rhoqo.
I-noopept powder (CAS 157115-85-0) isebenza
Abasebenzisi be-Noopept powder babika iziphumo zokucaciswa okuphuculweyo, imemori engcono kunye nokugxila. Kufuneka uphando olongezelelweyo ukucacisa kakuhle indlela i-Noopept powder ehambisa ngayo iingeniso zayo kwingqondo yomntu. Izifundo kwizilwanyana zibonise ukuba i-Noopept powder yandise umsebenzi we-alpha / beta1 kuyo yonke indawo yengqondo.
Kubantu, ngokusekelwe ekuhloleni, izifundo ezingalawulwayo, i-Noopept powder ibonise izibonelelo zokulungisa izigulane ezinokukhathazeka okucokisekileyo. Okwangoku, iipilisi ze-Noopept ezinobumba obuhlaza ziphantsi kokuhlolwa kweklinikhi njengendlela yokuphatha ukungabikho kwengqondo kwengxaki yomsindo kunye nesibangele. Iingeniso zengqondo zivela kwizenzo zokulwa ne-antioxidant, izakhiwo ezichasayo, kunye nokuvinjelwa kobutyhefu nokupheliswa kwe-glutamate kunye ne-calcium. Kwaye kwaphawula ukuba ukuveliswa kwegazi kunye nokuhamba kwegazi kwakuphuculwe.
Kuthathwe ngomlomo, i-Noopept powder ixhaswa yinkqubo yokugaya kwaye ivele iwele i-blood-brain brain barrier. Xa ilawulwa kwii-dosages ezifanelekileyo, iphantse iyasetyenziswa ngokupheleleyo ngengqondo, kwaye incinci kakhulu iyachithwa. Iithagethi ze-Noopept zeeprojitamate izakhiwo ze-receptor apho kukholwa ukuba zibophe nge glutamate kwaye zivimbele ukuphazamiseka. I-glutamate, enye yezona zinto ezinamandla kakhulu ze-neurotransmitters, ixhasa kwaye ikhulise ukusebenza kweenkcukacha.
I-noopept powder yenza ngokukhawuleza xa sele igazini, ikhulisa ingcamango emva kwe15 kwimizuzu ye-20. Iibhengezo zengxelo yokuxhaswa ngokukhukula okucacileyo okulethwa ngethuba elongezelelweyo loko-oxygen eyongezelelweyo kwingqondo kunye nokusetyenziswa kwe-glucose. Abantu abaninzi babika umbono ophuculweyo kunye nemibono enamandla, emininzi. Abanye baye bavakalisa ukuva okuphuculweyo emva kwexesha elifutshane lokusetyenziswa.
I-powder ye-Noopept yongezelelo le-nootropic eliye lafumana ingqwalasela eninzi kungekudala. Unxulumene ngokusondeleyo kwintsapho eyaziwayo ye-racetam ye-nootropics eyaziwa ngeenzuzo zabo kwiikhono lokuqonda kunye neendawo zabo zokuphepha. Yintoni eyenza i-Noopept powder eluhlaza i-nootropic ekhethekileyo ebhokisini lakho leethuluzi kukuba iimpembelelo zayo zivakalelwa ngokukhawuleza emva kokungena.
Uninzi lwe-nootropiki lunokuthatha iintsuku, iiveki, okanye iinyanga, ngenxa yeziphumo zazo ezipheleleyo ukukhaba kodwa i-Noopept powder eluhlaza enye ibali. Enye i-nootropic efanisa ne-Noopept ye-powder imiphumo esheshayo yi-phenylpiracetam.
Okwangoku, i-Noopept powder ebomvu icetywayo kwaye isasazwa eRashiya nakwamanye amazwe angqongileyo ngenxa yeempawu zayo ze-nootropic. Udumo lwayo luye lwakhula kakhulu kwaye luye lwasasazwa kwihlabathi jikelele.
I-noopept powder njengoko i-nootropic ivame ukufaniswa ne-piracetam kunye ne-aniracetam. Isebenza ngendlela efana ne-piracetam kodwa iqikelelwa ukuba yi-1,000 kumaxesha e-5,000 ngaphezulu. Ubungqina obumangalisayo abubonakalisi ukuba umphumo wayo uphambili; ngokuzenzekelayo kubhetele ngakumbi kwi-receptors yengqondo, kwaye ngenxa yoko, i-Noopept powder eluhlaza ingathathwa ngamanani amancinci ukuvelisa iziphumo ezifanayo njengePiracetam.
I-noopept powder nayo ayithengi kakhulu xa kuthelekiswa namanye ama-nootropiki ngenxa yeendlela ezinamandla ngayo nge-milligram. Ukusebenza kwayo kunye neendleko ezibiza ngeyona dose zenze into eyintandokazi phakathi koluntu lwe-nootropic.
I-GVS-111 Powder Raw
I-Noopept (GVS-111) I-powder Marketing
Ngaba i-Noopept powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Kuzo zonke iziphumo ezinokuthi i-Noopept powder ingaba nayo kwimpilo yakho engqondweni, inemibandela embalwa yecala echaphazelekayo ekufuneka iphawulwe njengentloko, ukungazinzi, ukuxakeka, kunye nokugwenxa. Ezi ziqhelekileyo xa i-Noopept powder eluhlaza ithathwa kumaxabiso aphezulu.
Ubungqina obuninzi bubonisa ukuba i-Noopept powder inokuphucula imiphumo yezikhuthazo ezifana ne-amphetamines, ngoko kucetyiswa.
Indlela yokuthenga i-GVS-111 powder: Thenga i-Noopept powder esuka kwi-AASraw
Ukusetyenziswa kwamadoda (1)
I-Nootropics powder (8)
Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones (4)
I-Fat Loss powder (3)
I-steroid powder (26)
Amachiza e-PCT okubuyisa –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin